यी हुन पुग्नैपर्ने नेपालभित्रका ३० स्थानहरू, के के छन विशेषताहरु ? « Naya Bato
यी हुन पुग्नैपर्ने नेपालभित्रका ३० स्थानहरू, के के छन विशेषताहरु ?
शिला पाण्डे/नेपालमा केही त्यस्ता ठाउँ छन्, जुन विदेशी मात्र होइन नेपालीकै लागि पनि उत्तिकै आकर्षक छन् । ती गन्तव्यको उचित प्रचार गर्न सके एसियाका दुई ठूला मुलुक चीन र भारतबीच रहेको नेपाल पर्यटन क्षेत्रमा निकै अघि बढ्न सक्छ ।
रङ फेरिरहने यो ताल मुगुमा जिल्लामा पर्छ । मुलुककै ठूलो यो ताल २ हजार ९ सय ७२ मिटर उचाइमा छ ।
चिसापानी कर्णाली नदीले पहाड छिचोलेर तराईमा निस्कने स्थान हो । अझ भनौँ, सुन्दर सुदूरपश्चिमको मुख्य प्रवेशद्वार । यहाँ रहेको कणर्ालीको पुल एसियाकै दोस्रो नमुना पुल हो, जो एउटा पिलरमा अडेको छ । कणर्ालीको माछा र पुल यहाँको मुख्य विशेषता हुन् । सबैभन्दा बढी जंगली हात्ती, दुर्लभ पाटेबाघ, विश्वकै दुर्लभ एकसिङ्गे गैंडा, कृष्णसार र हजारौंको सड्ख्यामा चित्तल भएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज यसको नजिकै छ । नेपालगन्जबाट ८५ किलोमिटर पर्ने अम्वसाबाट १२ किलोमिटर दक्षिणतर्फ यात्रा गरेपछि निकुन्ज पुग्न सकिन्छ ।
धनुषाको यो सहर राजा जनक र उनकी पुत्री जानकीको भूमि हो । धार्मिक र सांस्कृतिक हिसाबले सम्पन्न मैथिली सभ्यताको धरोहर हो । काठमाडौंबाट ४ सय किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा रहेको यो सहर बिस्तारै पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकसित हुँदैछ । यहाँस्थित राम-जानकीको मन्दिरको आफ्नै महत्त्व छ । यो मन्दिर सन् १९११ मा टिकमगढ (भारत) की राजकुमारी कुमारी वृषभानुले बनाएकी हुन् ।
जुगल हिमालको फेदमा एकै ठाउँ पाँचवटा पोखरी । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ४ हजार २ सय मिटर माथि रहेको यी पोखरीसम्म पुग्न गाडी छोडेपछि १२ दिन पदयात्रा गर्नुपर्छ । नीलो आकाश र त्यसका बादलको प्रतिविम्बले पोखरीहरू आकर्षक देखिन्छन् । एउटा पोखरी पूरै घुम्न झन्डै आधा घन्टा लाग्छ । कान्तिपुर बाट